China PSA Nitrogen Production gas plant Psa Nitrogen Generator Equipment Psa Nitrogen Machine abakhiqizi nabaphakeli | NOMA
Ngophethiloli ofanayo we-adsorbed (adsorbate) kunoma yikuphi ukukhangisa, izinga lokushisa eliphansi, ingcindezi ephakeme nomthamo omkhulu wokukhangisa
lapho ukumuncwa kuhlala kuzinzile; ngaphandle kwalokho, izinga lokushisa eliphakeme, ingcindezi ephansi namandla amancane okukhangisa. Uma izinga lokushisa lihlala lingashintshi, ukususwa nge-decompression (ukupompa okuphefumulayo) noma ngaphansi kwengcindezi ejwayelekile kubizwa nge-pressure swing adsorption (PSA) uma kwenzeka ukukhangisa ngaphansi kokucindezelwa.
Njengoba kukhonjisiwe ngenhla, ubukhulu be-adsorption ye-oxygen ne-nitrogen yi-carbon molecular sieve yehluka kakhulu. I-nitrogen ne-oxygen zingahlukaniswa ngenxa yomehluko wosayizi we-oxygen ne-nitrogen adsorption kusuka emoyeni ngaphansi kwengcindezi ethile. Lapho ingcindezi ikhuphuka, i-carbon molecular sieve i-adsorbs oxygen bese ikhiqiza i-nitrogen; lapho ingcindezi iwela kokujwayelekile, i-sieve isusa i-oxygen futhi ivuselele i-nitrogen. Imvamisa, i-PSA nitrogen generator inama-adsorbers amabili, elinye lawo likhangisa oksijini futhi likhiqize i-nitrogen, kanti elinye likhipha umoya-mpilo liphinde livuselele i-nitrogen. Ngale ndlela, i-nitrogen ikhiqizwa ngokuqhubekayo.
1. Imishini isebenzisa izinqubo zokulinganisa ingcindezi engezona amandla kuze kube kuncishiswa ukusetshenziswa komoya onomfutho ngqo.
2. I-Ae ingakhetha i-sieve yamangqamuzana esindisa amandla kakhulu ngokuya ngezimo zamakhasimende.
3. Ubuchwepheshe obuthuthukisiwe bokulayisha ukuze kuqhubeke ukunciphisa ukusetshenziswa kwamandla.
4. Ubuchwepheshe bokupakisha obuthuthukisiwe ukwenza i-carbon sieve yamangqamuzana ihlangane kakhulu futhi ifane futhi inciphise ukungalingani kokungqubuzana
5. Ukwelashwa okunokwethenjelwa kakhulu kwegesi ukuqinisekisa ukusebenza kahle kwe-adsorption nempilo yesevisi yesihlungo.
6. Ama-valves e-Switchover nezingxenye zemikhiqizo edumile eqashwe ukuqinisekisa ikhwalithi yomkhiqizo.
7. Ubuchwepheshe obuthuthukile be-cylinder compaction technology.
8. Imishini ingabhekwa ngesikhathi sangempela.
9. I-nitrogen engavumelekile ingakhishwa ngokuzenzekelayo.
10. I-HMI enobungane.
Langaphambilini Isitshalo esikhiqiza i-PSA nitrogen esikhiqizayo Umshini Wokwenza igesi yeNitrogen
Olandelayo: Umshini wokupakisha we-nitrogen osetshenzisiwe embonini yokudla Ibanga leNitrogen Generator
I-Liquid Oxygen neNitrogen Production Plant / Liq ...
Izinzuzo Zomkhiqizo Siyaziwa ngobuchwepheshe bethu obuhle kakhulu bokwenza izitshalo zomoya-mpilo ezimanzi ezincike kubuchwepheshe be-cryogenic distillation technology. Ukuklama kwethu ngokunemba kwenza izinhlelo zethu zegesi zezimboni zithembeke futhi zisebenze kahle okuholela ezindlekweni zokusebenza eziphansi. Ukwenziwa ngezinto ezisezingeni eliphakeme nezakhi, uketshezi lwethu o ...